China soft PVC mukwende Tags fekitari uye vagadziri | SJJ
Vanhu vanogara vachiisa tag pasutukesi yemikwende kuti vapatsanure yavo yega kubva kune vamwe. Kuti usiyanise mukwende wako nekukasira kana uri parwendo, nzira yakanakisa ndeye kushandisa iyo Soft PVC mukwende tag nemarogo ako kana hunhu hunokosha.
Vanhu vanogara vachiisa tag pasutukesi yemikwende kuti vapatsanure yavo yega kubva kune vamwe. Kuti usiyanise mukwende wako nekukurumidza kana uri parwendo, nzira yakanakisa kushandisa iyo Soft PVC Lageage Tag nemarogo ako kana hunhu hwakakosha.
Iyo Yakapfava PVC Mukwende Tagsvane mikana yakawanda yekuenzanisa nevamwe, sesimbi, mapurasitiki akaoma, matanda kana mapepa emikwende. Iyo Yakapfava PVCMukwende Tagsakapfava, anoshanduka-shanduka, ane mavara akawanda uye anonyorwa kupfuura esimbi Matagi eLageage, mutsauko wakanyanya ndewemapepa ePVC emikwende haazosve ngura mushure mekushandisa kwenguva yakareba. Iwo akapfava PVC Mikwende Matagi akasimba kupfuura iwo emapuranga. Iwo maSoft PVC Mikwende yekutakura haizotyorwa mumvura uchienzanisa nematagi epepa.
Iwo maficha eSoft PVC Lageji ma tag anogona kugadzirwa mu2D kana 3D, ichave yakawedzera cubic kupfuura akaomarara PVC aya. Mabhuku eBraille, akadhirowewa, akazara ruvara, akadhindwa kana laser akanyorwa marogo anowanikwa pane eSoft PVC Mikwende yekutakura. Ruzivo rwakazara runogona kudhindwa kana kunyorwa pane iwo Anoteerera PVC Mateki emagetsi. Iyo dehwe kana tambo dzeplastiki dzinokubatsira iwe kupfeka kana kubvisa mataki emikwende zvakasununguka mune chero nguva.
Zvakajairika Zvakasungirirwa Sarudzo: pachena mapurasitiki tambo, dehwe tambo, PU tambo uye nezvimwe.
Pashure: Yakapfava PVC Coasters
Zvadaro: Yakapfava PVC Zipper Inodhonza
tsika yekutakura tag
Tsika Rubber Tag
Mukwende Bhegi Tag
Mukwende Name Tag
Rubha Mutoro Tag
nyoro pvc mukwende tags
Kufamba Kwemagegi Tag